Ukuqashelwa Kobuso Bomuntu
Ukuqashelwa kobuso bomuntu kususelwa kwimininingwane yesici sobuso somuntu sokukhonjwa kwe-bio-metric metric technology. Ikhamera noma i-CCTV CAM ...
Ukuqashelwa kobuso bomuntu kususelwa kwimininingwane yesici sobuso somuntu sokukhonjwa kwe-bio-metric metric technology. Ikhamera nomaIkhamera ye-CCTV Ukuqoqa izithombe noma ukusakazwa kwevidiyo okuqukethe ubuso bomuntu, futhi kutholwe ngokuzenzakalelayo futhi kulandelele ubuso ezithombeni.
Umumo wokuqashelwa kohlelo lokusebenza main
Ukuqashelwa kobuso kusetshenziselwa ukukhonjwa. Ngenxa yokuthandwa okusheshayo kokubhekwa kwevidiyo, izinhlelo eziningi zokubhekwa kwevidiyo zidinga ngokuphuthumayo ibanga elide, ukungabambisani nobuchwepheshe obusheshayo, ukuze bakhombe ngokushesha ubunikazi besikhathi sokugcina, esihlakaniphile sokuqala. Ukuqashelwa kobuso akungabazeki ukuthi kusetshenziselwa ukuhlonza
Kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa ubuchwepheshe bokutholwa kobuso okusheshayo, ubuso bungaseshwa kusuka ezithombeni zevidiyo ngesikhathi sangempela futhi uma kuqhathaniswa nedatha yobuso ngesikhathi sangempela sokukhonjwa okusheshayo.
Ububanzi bokuqashelwa kobuso bohlelo lokusebenza
Kuyingxenye ebalulekile yemisebenzi yomphakathi kanye nokubutha izindawo emapaki, amafektri, izitolo ezinkulu, izikhungo zenkomfa, izindawo zokuhlala, izindawo zokuhlala, izibhedlela, izimoto ezinkulu' Izimakethe, amahhotela, izindawo zokudlela, izindawo zokuzijabulisa nezakhiwo zasehhovisi. E-Lobby Entrance, i-Eleverator nezinye iziteshi ezinkulu njengokusetshenziswa kwevidiyo yangaphakathi nangaphandle.
Siza amaphoyisa athole izigebengu
Ngokufakazela idatha yemifanekiso eqondiwe ukuthola ukuthi ngabe kukhona ulwazi olubalulekile lwabantu abayisisekelo ku-database. Njengokufaka izinhlelo ezikhumulweni zezindiza noma eziteshini ukuze ubambe amaFugitive.
Izindawo ezivikelwe ezokuphepha zingakhomba ubunikazi bokungena kokuzama ukuqashelwa kobuso. Uhlelo lokuqashelwa kobuso lungasetshenziselwa ibhizinisi, ukuphepha kokuhlala nokulawulwa kokuqashelwa kobuso. Njengokuthi Isikhathi Sokulawula Ukuqashelwa Kwesikhathi Sokulawula kanye Nezinhlelo Zabakhona, Izinhlaka Zokuphepha Zobuso Zobuso. Ukugoqa uhlelo lokuqapha ikhamera.
Uhlelo lokubhekwa Kungenziwa ngezindawo zomphakathi ezifana nezindiza zezindiza, izinkundla zemibhekwane, izitolo ezinkulu, njll. Uma ibhange'Ama-ATM, amakhadi womsebenzisi namaphasiwedi antshontshiwe, abanye bazothatha imali. Ngenkathi ukusetshenziswa kokuqashelwa kobuso kuzokugwema lokhu kwenzeka.
PHAMBI Indlela yokuphoqelelwa yoMthetho Wamadolobha kufanele igqoke ikhamera egqoke amaphoyisa
Yini i-IP CCTV? OLANDELAYO